Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / WOWOW Ibhulashi yeNickel Igumbi lokuhlambela ngombhobho
Itephu yangoku yokuhlambela: Itofu yesinki yegumbi lokuhlambela enomgangatho obonakala ngathi yibrashi yenickle egqityiweyo. Nceda uphucule igumbi lakho lokuhlambela!
I-faucet ye-bathroom ene-2 ​​izibambo: i-centerset ye-intshi ye-4, kulula ukuyifaka kunye nemingxuma emi-3; uyilo lwakudala kunye nedreyini yokunyusa intonga.
Ulwakhiwo olunzima: Yakhelwe kwikhatriji yeceramic etywiniweyo ephezulu, ijikeleza kakuhle ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle kokuthontsiza kwamanzi.
Umbhobho woMgangatho oPhezulu: Gcina amanzi kwaye unokuchukumisa kancinci ngeminwe ukususa isikali kunye nekhalsiyam. Izibambo ezimbini ezifudumeleyo nezibandayo, zilawula ngokuchanekileyo ubushushu bamanzi.
Nceda uzive ukhululekile ukusichukumisa ukuba kukho nayiphi na imibuzo. Siza kusombulula ingxaki yakho ngokukhawuleza.
I-SKU: 2321200 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Iziko lokuqubha leepompo zangasese tags: 4 intshi, Uqhekeze uNickel, Ukwahlula Ukuphatha